साहित्य Archives - Page5of5- Muldhar Post
जिन्दगिको रफ्तार नै खेल भैदियो
गजल जिन्दगिको रफ्तार नै, खेल भैदियो लक्ष्यरुपि यात्रा किन फेल भैदियो। सजाउने थिए सन्सार ,घाइते भयो मन वरिपरि काडेतार भै जेल भैदियो। मनले के गर्नु खै, धनले सबै किने पछि हार उस्को पक्कै थियो झेल भैदियो। सोचे जस्तो किन, हुदैन है जीवन सपना सारा बगाउने भेल भैदियो। जय ओलि (बजुरेल कान्छो) छेडेदह गाउँपालिका ७...
बिमान स्थलको बेन्चबाट
मेनपावरले फोन गर्यो र भन्यो " भाइ तिम्रो भिषा झर्यो " मैले उत्सुक हुँदै सोधे दाइ कति दिनमा उडनु ? अब तीन दिन धोद्रे स्वर उसले निकाल्यो हस दाइ मैले फोन राख्न खोजे फेरि बोल्यो भाइ ? हजुर भोलि सम्ममा एक लाख असी हजार काउन्टरमा बुझाउनु जेनतेन गरेर पैसा बुझाए र म मेरो भबिस्य किन्न राजधानीको बाटो हुँदै खा...
काठमाडाैं- पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको आत्मकथा ‘सिंहदरबार बदल्ने संघर्ष’ बजारमा आएको छ । लालबाबु पण्डित नेकपा (एमाले)का नेता हुन् । उनी सामान्य प्रशासन मन्त्री भएपछि ग्रीनकार्ड वा पिआरको आवेदन दिनेले राज्यका जिम्मेवार ओहदा ओगटेर बस्न नपाइने कुरा उठाएसँगै चर्चामा आएका थिए । यसले विशेषगरि डिभीलगायत ...
पहिलो श्रीमानलाइ लेखेको मनछुले प्रेमपत्र, जो तपाइपनी निकै भक्कानिहुन्छ !
तिमीसँग मेरो पहिलो भेट मेरै माइती घरमा मेरो हात माग्न आको दिन भाको थियो। कक्षा ८ मा पढ्दा पढ्दै विहेपछि नि पढाउने कुरा सुनेर मेरो बाआमाले सहमति जनाएका थिए। मलाई त्यसवेला तिमीसँग पटक्कै विहे गर्न मन थिएन। तर, के गर्नु १७ वर्ष भैसकेको पिर मेरो बा आमालाई निक्कै थियो। नभन्दै त्यसको महिना दिनमै म बेहुली भएर तिम्रो घरको आ...
बाटोमा आमासँगै हिँडिरहेको बालक देख्दा आफ्नो बालापनको याद आउँछ । आमा मलाई त्यो मोटर किनिदिनु, आईसक्रिम खाने, गुडिया चाहियो भन्दै बालक रोइरहेको छ । कति रमाइलो बालापन ! हरेक आवश्यकता आँशुले पूरा गरिदिने त्यतिले भएन भने भुइँमा लडिबुडी खेलिदिए हुने । मेरा पनि त्यस्तै दिन थिए । जता जाँदा पनि आमाको साडी समातेर अघ...
ब्वाइफ्रेन्ड बनाउने रहर शीर्षकमा लेख छापिएको दिन एकजना अपरिचित पुरुषले फेसबुकमा म्यासेस गरे । उनीसँग साथी भएको १ महिना जति भएको थियो । त्यो बीचमा बोलचाल भने भएको थिएन । १० जना म्युचल फे्रन्ड भएकाले रिक्वेस्ट एसेप्ट गरेकी थिएँ । सायद त्यो लेख पढेर नै म्यासेस गरेको हुनुपर्छ । फेसबुकमा साथी भए पनि चिनजान नभएकाले म उनला...
गोरेसंगको एकतर्फी प्रेम- पढ्नुहोस‌् एउटा प्रमे कथा
कलेज ६ बजेदेखि सुरु भएपनि ४ः३० मै उठेर कलेज जाने तर्खर गर्नुपथ्र्यो । ढिला उठेको दिन कहिले एउटा आँखामा मात्र गाजल लगाउन भ्याउथेँ । कहिले लिपिष्टिक लगाउनै बिर्सन्थेँ, कहिले कपाल बाँध्ने लेबेन्टी नभेटेर हैरान हुन्थ्यो । घरदेखि कलेज टाढा भएको र एउटा बस छुटेपछि अर्काे नपाउने हुनाले सधै‍ हतार हुन्थ्यो । काठमाडौँमा जस्तो ...
त्यो दिल भित्र (गजल)
त्यो दिल भित्र मैले बस्ने,ठाउँ कस्तो छ । पलपलमा तिम्ले डाक्ने,नाउँ कस्तो छ ।। थोरै भयो छुट्टीयको,तर धेरै याद आउछ । तिमि बस्न त्यो ठाउँको, गाउँ कस्तो छ ।। पिङ खेलेको,कसम खाको,मालिकाको छेउमै । तिम्रो ओठमा चुम्वन खाको, घाउँ कस्तो छ ।। उकालोको छोटो बाटो, हात समाएर हिड्थ्यौ । हिड्दा हिड्दै डाम परेको,पाउँ कस्तो ...
हिरोईन ले पाध्यो समाचार भैदियो (गजल)
गजल अबला बलत्कार हुदा लाटो अखबार भैदियो । तर उता हिरोईन ले पाध्यो समाचार भैदियो । जान्ने बुज्ने होला भनेर बाले शहर पठाएको, छोरो यता शहरमा आएर झनै गवार भैदियो। छोराले जब बुहारी लिएर छुट्टै गएर बस्यो तब दोहोरो भुमिका गर्ने कलाकार भैदियो । त्यो पिताको यस्तो के मजबुरी थियो होला छोरी लाई लिलामी मा राख्न ...